अन्तिम संवादमा पाईलटद्धारा काठमाडौं टावरलाई आगलागी भएको जानकारी गराएका थिए ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
अन्तिम संवादमा पाईलटद्धारा काठमाडौं टावरलाई आगलागी भएको जानकारी गराएका थिए ?
त्रिभुवन विमानस्थलभित्र नेपाली हवाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हवाई दुर्घटना भएको छ । बंगलादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनभित्र पर्ने युएस–बंगला एयरलाइन्सको ‘बम्बाडिएर (डिएच८डी)’ जहाज दुर्घटना हुँदा ४९ जनाको निधन भएको छ ।
कहिले पशुपति र कहिले कोटेश्वरतर्फबाट अवतरण गर्न खोजिरहेका पाइलट तनाव वा थकानमा थिए, उनी अलमलिएका थिए । फायर फायर जहाँजमा आगलागी भएको पाईलटद्धारा काठमाडौं टावरलाई जानकारी गराएका थिए । काठमाडौं टावर : धावनमार्ग तर्फ आइरहेका सम्पूर्ण जहाँजलाई अन्य ठाउँमा अवतरण गर्न वा होल्ड गर्न अनुरोध ।